Sannadka 2010: “Jacaylku wax walba wuu u adkaystaa. Jacaylku weligiis ma fashilmo„
„Jacaylka aan wadaagno ee aan u qabno Ilaah ayaa ah jacaylka ugu qiimaha badan uguna wax dhisida dhammaan. Jacaylka caynkaas ah wuxuu mideeyaa dadka kala duwan, jinsiyad kasta, iyo af kasta, iyagoo wada jira oo farxad leh si ay Rabbiga ugu adeegaan “garabka isku dhafka ah”.”
Shirka 2010: “Yehowah u dhowow!”
Haiti Dhulgariir (2010)
Sadankii 2010 waxaa lagu qiyaasaa inoo dhashay 20 bilyon oo wiil iyo gabar LA iaku daray ah.
Doorashadii madaxtinimo ee somaliland 2010
Ciyaaraha Gobolada 2010
Isqarxinta Lakki Marwat ee 2010
4 Janaayo 4 – Burj Khalifa, oo ah qaab dhismeedka ugu dheer adduunka, ayaa laga furay Dubai.
6 – 7 Janaayo sarkaal oo ka tirsan maleeshiyada ayaa ku dhintay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta Makhachkala, ee caasimadda Dagestan.
8 January – Tababare ay u adeegsan jireen xulka kubbadda cagta Togo ee ka qayb galayay koobka qaramada Afrika ee Angola ayaa waxa uu ku toogtay tabobaruhu xadka u dhexeeya Congo iyo Angola. Inta la xaqiijiyay weerarka waxaa ku dhintay 3 qof 8 kalana waa ay ku dhaawacmeen.
14 Janaayo - Dowladda Yemen ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah fallaagada Al-Qaacida. 40 qof ayaa ku dhintay shil laba bas oo ka dhacay Papua New Guinea.
17 Janaayo - Rabshado dhowr maalmood socday ayaa ka bilowday magaalada Josh ee dalka Nigeria, halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 600 oo qof.
25 Janaayo - 90 qof ayaa ku dhintay xeebaha dalka Lubnaan shilkan diyaarada Boeing 737 ee laga leeyahay dalka Itoobiya.
30 Janaayo - 17 qof ayaa ku dhintay, 47 kalena way ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Bajaur (Bakistaan).
8 Febraayo - Duufaanno ku dhuftay meel u dhow marinka Salang ee Hindu Kush, Afgaanistaan, ayaa dilay ugu yaraan 172 qof.
13 Febraayo - Ciidamada ISAF ayaa howlgalkii ugu ballaarnaa ka bilaabay Afgaanistaan ​​iyagoo wata magaca Moshtarak. 16 qof ayaa ku dhimatay weerar bambaano oo lagu qaaday warshad rooti ah oo Jarmal ah oo ku taal magaalada Pune ee galbeedka Hindiya.
15 Febraayo - 18 qof ayaa ku dhimatay 125 kalena way ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay magaalada Halle ee dalka Beljim. 24 ka mid ah Booliska Hindiya ayaa lagu dilay weerar ay koox Maoist ah ku qaadeen gobolka West Bengal ee Hindiya.
17 Febraayo - 102 qof ayaa ku dhintay baraf ka dhacay tuulada Bagaro Serai ee Bakistaan.
18 Febraayo - Ivo Josipović wuxuu noqday madaxweynaha Kuruweshiya. Milatarigu waxay afgambi ku qabsadeen madaxweynihii Niger Mamadou Tandja. Markabka SV Concordia ee ka babanaya calanka Barbadia ayaa rogmaday oo degtay xilli ay dabeylo ka socdeen xeebaha Barasiil. Dhammaan 64-kii qof ee saarnaa ayaa la badbaadiyay.
19 Febraayo - Curiye kiimikaad leh nambarka atomiga 112 waxa si rasmi ah loogu magacaabay Copernicium iyadoo lagu sharfay cirbixiyeenkii Nicolaus Copernicus. Burburkii Minaaradda Masjidka Bab Bardain ee magaalada Meknes ee dalka Marooko, ayaa waxaa ku dhintay 41 qof, in ka badan 80 kalena waa ay ku dhaawacmeen.
20 Febraayo - Daadad iyo dhoobo ka dhacay Madeira. Kereetee, heerkulku wuxuu kor u kacay bishii Febraayo taariikhda cabbiraadda. +29°C ayaa lagu duubay Ciraaq.
22 February – Ku dhawaad ​​40 qof ayaa ku dhintay shil bas oo ka dhacay La Libertad, Peru.
25 February – Viktor Yanukovych ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha Yukrayn.
27 Febraayo: Dhulgariirkii Chile oo cabirkiisu ahaa 8.8 Rikter Cabir; ku dhawaad ​​nus kun qof ayaa dhintay. Afti dadweyne oo ka dhacday dalka Nauru ayaa badi codbixiyayaashu kasoo horjeesteen in si toos ah loo doorto madaxweynaha.
26 Febraayo - 1 Maarso – Orkan Xynthia ayaa tobanaan qof ku dilay Faransiiska iyo wadamada kale ee Yurub.
1-dii Maarso – José Mujica ayaa la wareegay xilka madaxweynaha Uruguay.
3 March - Verkhovna Rada ee Yukrayn ayaa soo saartay codka kalsoonida xukuumadda Yulia Tymoshenko.
4 Maarso - Faure Gnassingbe ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Togo. 65 qof ayaa ku dhintay in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen ka dib markii uu argagax ka dillaacay macbadka Janki Ram ee Kunda ee gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya.
6 March – Ayslaan ayaa diiday qorshaha ay ku bixinayaan deymaha bangiyada ee muwaadiniinta Holland iyo Boqortooyada Ingiriiska afti qaran.
7 Maarso - qabtay Oscars 82aad. Dhowr boqol oo qof ayaa ku dhintay rabshado diimeed oo ka dhacay meel u dhow magaalada Jos ee dalka Nigeria. Doorashada baarlamaanka ayaa lagu qabtay Ciraaq. Afti qaran Swiss-ku waxay ku gacan saydhay soo jeedinta ah in la sameeyo wakiilo sharci ah oo xoolaha ah.
8 Marco – 42 qof ayaa ku dhintay dhulgariir ka dhacay Elazığ (Turkiga), in ka badan 70 ayaa ku dhaawacmay.
11 Maarso - Yukrayn, dawladdii ugu horreysay ee Mykola Azarov ayaa la aasaasay. Sebastián Piñera wuxuu noqday madaxweynaha Chile.
14 March – Doorashadii baarlamaanka ayaa lagu qabtay Colombia.
16 March – Qubuuraha Kasubi (Uganda) ayaa ku burburay dab.
17 Maarso: Madaxa waaxda maaliyadda iyo qorsheynta ee xisbiga talada haya ee Labour Party of Korea, Pak Nam Gi, ayaa la toogtay ka dib markii uu fuliyay howlgal fashilmay oo lagu bedelayo kuuriyada waqooyi, uuna dalka u horseeday burbur dhaqaale. Intii ay socdeen mudaaharaadyada dawladda lagaga soo horjeedo ee Tayland, dibad-baxayaashu waxay dhiigga bini'aadamka ku daadiyeen afaafka hore ee xarunta xisbiga Dimuqraadiga ee talada haya iyo guriga uu deggan yahay Ra'iisul Wasaare Abhisit Vejjajiva.
18 Maarso - Waxaa bilaabmay Safarkii 23aad ee Xarunta Hawada Caalamiga ah (ISS).
26 Maarso - Corvette South Korea "Cheonan" ayaa ku degtay meel u dhow jasiiradda Baengnyeong.
28 Maarso- Tirada aagagga wakhtiga ee Ruushka ayaa laga dhigay 11 ilaa 9.
29 Maarso – Waxaa jiray laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka oo ay ku dhinteen 39 qof 102 kalena ay ku dhaawacmeen.
30 Maarso - shilkii ugu horreeyay ee alwaaxyada proton ayaa ka dhacay goobta weyn ee Hadron Collider ee Ururka Yurub ee Cilmi-baarista Nukliyeerka (CERN) oo u dhow Geneva.
31 Maarso – 12 qof ayaa ku dhimatay 18 kalana waa ay ku dhaawacmeen weerar laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kizlar ee Dagestan.
2 Abriil - Hawlgalka Soyuz TMA-18 ee maned ee Saldhigga Caalamiga ah (ISS) ayaa bilaabmay.
5 Abriil - Hawlgalka STS-131 ee shuttle Discovery ayaa bilaabmay. Brasiil: in ka badan 200 oo qof ayaa ku dhintay daadad iyo dhoobo.
6 Abriil - Rabshado ka dhan ah dowladda ayaa ka dhacay Kyrgyzstan, taas oo keentay in madaxweyne Kurmanbek Bakiyev xilka laga xayuubiyo maalintii xigtay. 76 sarkaal ayaa lagu dilay weerar ay jabhada Maoist-ku ku qaadeen kolonyo ka tirsan booliska federaalka oo marayey degmada Dantewada ee badhtamaha bari ee Hindiya.
7 Abriil - Qeybtii hore ee xuska sanadguuradii 70-aad ee xasuuqii Katyn ayaa ka dhacday magaalada Katyn. Madaxweyne Kurmanbek Bakiyev ayaa xilka looga xayuubiyay kadib dibad baxyo bulsho oo ka dhacay Kyrgyzstan.
8 Abriil - Doorashooyinka baarlamaanka ayaa lagu qabtay Sri Lanka.
9 Abriil – Madaxweynaha Ruushka Dmitry Medvedev ayaa si rasmi ah u furay dhismaha dhuumaha gaaska ee Nord Stream ee agagaarka Gotland.
10 Abriil - Diyaaradda Tu-154M oo uu la socday Madaxweynaha Boland, Lech Kaczyński, ayaa burburtay xilli ay ku soo degtay garoonka diyaaradaha ee Smolensk. 96 qof ayaa ku dhintay. 10 ka mid ah 18-kii qof ee saarnaa ayaa ku dhintay burburka diyaaradda helicopter-ka ee Mi-8 oo ay la socdeen dalxiisayaal Jarmal ah oo ku sugnaa Kamchatka. 25 qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyo siyaasadeed oo ka dhacay Tayland.
11 Abriil - wareegii koowaad ee doorashada baarlamaanka ayaa ka dhacay dalka Hungary. Doorasho guud ayaa ka bilaabatay Suudaan.
12 Abriil – 9 qof ayaa ku dhintay 30 kalena way ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay meel u dhow Merano ee waqooyiga Talyaaniga.
14 Abriil Volcano Eyjafjöll ayaa ka qaraxday Ayslaan, taasoo keentay in ay curyaamiyaan gaadiidka cirka ee Yurub. 2,698 qof ayaa la dilay iyo 12,000 ayaa ku dhaawacmay dhulgariir ku dhuftay gobolka Qinghai ee dalka Shiinaha.
15 Abriil -Sababo la xiriira siigada ka soo baxday foolkaanada Eyjafjallajökull ee Ayslaan, hawada sare ee inta badan Yurub waa la xiray. Doorashadii guud ee 4-ta maalmood ka socotay dalka Suudaan ayaa lasoo afjaray. Madaxweynaha hadda talada haya, Cumar Al-Bashiir, ayaa mar kale la doortay, waxaana Congress-ka Qaranka uu ku guuleystay ku dhawaad ​​73% doorashadii baarlamaanka.
17 Abriil - Ugu yaraan 41 qof ayaa ku dhintay laba weerar oo ismiidaamin ah oo ka dhacay xero qaxooti oo ku taal magaalada Kohat ee waqooyi-galbeed Bakistaan.
18 Abriil – Derviş Eroğlu ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Waqooyiga Qubrus.
20 Abriil - waxaa qarax ka dhacay ceelka saliidda ee Deepwater Horizon ee gacanka Meksiko, kaas oo bilaabay masiibo deegaan.
Karaganda, Kazakhstan, isgaarsiinta trolleybus waa la joojiyay.
21 Abriil - D.M. Jayaratne wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha Sri Lanka.
22 Abriil - Gacanka Meksiko, laba maalmood ka dib markii uu qaraxu dhacay, ceelka saliidda ee Deepwater Horizon, waxaa ku daatay malaayiin litir oo saliid cayriin ah; Dhacdadan ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah masiibooyinka deegaanka ee ugu waaweyn taariikhda aadanaha. Hawlgalkii ugu horreeyay ee hawada sare ee diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Boeing X-37 ayaa billaabay. Diyaarad Helicopter ah oo isku dayday in ay si sharci darro ah ugu degto Jasiiradda Mercury ee dalka Namibia ayaa burbur weyn u geysatay goobaha ay ku taranta shimbiraha badda ee halkaas ku yaalla.
23 Abriil - Derviş Eroğlu wuxuu noqday madaxweynaha Waqooyiga Qubrus.
25 Abriil - garabka midig ee Fidesz ayaa ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee Hungary. Madaxweynaha xilka haya ee Austria Heinz Fischer ayaa loo doortay wareegii koowaad ee doorashada mar labaad.
30 Abriil - Saliid ka soo daatay masiibada saliida ee Deepwater Horizon ee Gacanka Meksiko 20-kii Abriil waxay ku dhufatay xeebta Louisiana.
1 May: Fagaaraha Times Square, Manhattan, magaalada New York, boolisku waxay damiyeen baabuur guri lagu sameeyay. Dembiilaha oo asal ahaan ka soo jeeda Afgaanistaan ​​ayaa lagu qabtay diyaarad la qorsheeyay inay u duusho Yurub. Garoonka Caalamiga ah ee King Shaka ayaa laga furay meel u dhow magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika.
1 May - 30 Oktoobar - Bandhiga Bandhiga Adduunka 2010 ee Shanghai.
5 May – Mudaaharaadyo bulsho ayaa ka bilaabmay Giriiga.
6 May – doorashada baarlamaanka ee Boqortooyada Ingiriiska.
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro 2010.
↑ (2010 “Remain Close to Jehovah!” Convention)
↑ Earthquake in Haiti​—Faith and Love in Action
↑ Earthquake in Haiti
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=2010&oldid=223010"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Nofeembar 2021, marka ee eheed 17:44.